Ndagwurugwu nkenke Mmiri Na-eme Mfe - Magazin System Magazine
Ndagwurugwu nkenke Mmiri Ejiri Mfe
Ọnọdụ nke onye ọrụ ugbo na-arụ ọrụ taa nwere ihe ndị dị ize ndụ, ọtụtụ n'ime ha anaghị enwe ike ịchịkwa ọ bụla: mgbanwe ihu igwe, mgbanwe na ọnụahịa nke ngwaahịa ugbo, iwu gburugburu ebe obibi metụtara ikike ala na ikike iji mmiri, mmụpụta mmepụta ihe, wdg. udu mmiri n’ubi abụrụla nsogbu ọsọ ọsọ maka ọtụtụ mpaghara Russia. Osisi ndị na-anabataghị ụkọ mmiri dị n'ihe ize ndụ. A na-awakpo ihe ọkụkụ ọdịnihu. O kwere omume ịchịkwa ihe egwu dị na ịdabere na ụmụ irighiri ihe ndị sitere n'okike ma ọ bụrụ na etinyere ndị na-agba mmiri n'ubi.
Montlọ ọrụ Valmont bụ onye ndu ụwa niile n’ọrụ ịgba mmiri. Gburugburu ụwa, ụlọ ọrụ ahụ na-eji ihe karịrị 10 ọrụ. A na-ahụta ngwaahịa akara ala Valmont Valley n'ụwa niile dịka teknụzụ dị elu, nke a pụrụ ịdabere na ya na nke ịgba mmiri. Ekwenyere ndu ochichi a site na ntinye nke ihe Ndagwurugwu Ndagwurugwu a ihe kariri 000. Valmont bu onye mbu uzo ide mmiri nke na eme ka amita bawanye ma jiri mmiri ndi nke amamihe mee ihe.
1954. - enwetara ikike patent maka imepụta sistemụ irighiri mmiri sitere na Frank Zybak.
1964-69gg. - a na-ere osisi ndagwurugwu mbụ na mba ọzọ, France. Ndagwurugwu Ndagwurugwu renamed Valmont Industries, Inc. E webatara usoro a na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, na-enye nchedo mgbochi ogologo oge.
1969-74gg. - mepụtara igbe nke aka ya, ejiri taya taya na usoro.
1974-79g. - E tinyegoro usoro ogbugba mmiri n'ubi, nke na-enye ndị ọrụ ugbo ohere ikpuchi mpaghara ọzọ na mpaghara nke nhazi dị iche iche. E mepụtala usoro ogbugba mmiri n'ubi nwere ike ibugharị nkeji site na otu ubi n'ọzọ, yana usoro ịgba ala maka obere ubi.
1979-84g. - iwebata ogwe ndị nwere njikwa dịpụrụ adịpụ, a na-emepụta sprinkler na-arụ ọrụ na obere nsogbu.
1986. - imepu ihe maka ime ihe ogbugba mmiri nke mmiri site na iji komputa.
1989-94g. - Ndagwurugwu Ndagwurugwu Ndagwurugwu Ndagwurugwu na Ogwe Ndagwurugwu Ndagwurugwu Ndagwurugwu Ndagwurugwu na-enye gị ohere ị nwekwuo ike ịchịkwa sistemụ dị mkpa, gụnyere iji ohere dịpụrụ adịpụ site na ụlọ ọrụ.
1994-99g. - etinye usoro 8000th, nke gụnyere ogologo oge dị iche iche.
1999-2004g. - Okwu mmeghe nke ekwentị emeghere ikike ijikwa nrụnye site na ebe ọ bụla n'ụwa.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 60, Valmont anọwo na-echepụta ma na-emepụta usoro ịgba mmiri dị elu ma nwee nnukwu ọnọdụ n'ahịa, na-ewebata ụzọ ịgba mmiri kachasị dị elu ma dị irè nke na-emezu ihe niile a chọrọ.
Ngwunye ịgba mmiri na ndagwurugwu nwere ike iguzogide ọrụ ụbọchị kwa ụbọchị n'ihi usoro ndị siri ike na njigide nke opupu ihe ubi nke aka ya. Usoro ịgba mmiri nwere ike ịkwaga n'ọhịa dịgasị iche iche ma nye ezigbo mmiri mmiri; ha nwere njikwa dị mfe. Imewe na-ekpochapụ oge downtime. Ndị na-ere ahịa ama ama nke ọma na-ewetara akụrụngwa a, nke na -eme ka ojiji nke itinye ego n'ọrụ.
Nrụnye nke ịgba mmiri n'ihu
Ndagwurugwu dị n'ihu ndị na-agba mmiri (Ọgụgụ 1) na-enye oke mkpuchi nke mbara ala ma ọ bụ akụkụ anọ - ruo 98%. Na mgbakwunye, ndagwurugwu nke ihu dị iche iche na-echekwa mmiri ma belata mbubata na iji mmiri belata. Ndagwurugwu ndị na-agba n'ihu ndagwurugwu bụ ngwaọrụ ọrụ ugbo bara uru: enwere ike iji ha tinye kemịkal na fatịlaịza na mmiri ogbugba mmiri n'ubi (Ngosipụta 2), germination na leaching. Ndagwurugwu na-enyefe mgbasa ozi a pụrụ ịdabere na ya na usoro nnyefe mmiri, nhọrọ sara mbara nke kachasị, taya, nfuli, njikwa na ndị ọzọ.
Usoro ndagwurugwu ndagwurugwu na-eji ọtụtụ ọrụ otu ọrụ na mgbakọ dị iche iche eji eme ihe na sistemụ mmiri okirikiri. A maara nke ọma, ịdị ike ha na ogologo ha.
Agbanyeghị, n'adịghị ka nrụnye mmegharị mmiri na okirikiri, nrụnye ndagwurugwu ndagwurugwu na-aga n'ihu ma na-agafe ala. A nwekwara ike ịbugharị ụfọdụ nrụnye dị n'ihu ma ọ bụ bute ya, na-agbagha ugboro abụọ a gaghị agba mmiri (Fig 3, 4).
Ngwongwo mmiri nke ihu mmiri na-echekwa mmiri na ume site na ụgwọ ọrụ dị ntakịrị ma dabara adaba maka ubi sitere na hekta 4 ruo 405 nwere mkpọda nke ruru 6%.
A na-achịkwa ụgbọ ala ndị dị n'ihu site na enyemaka nke eriri eletrik dị elu, ajị ajị anụ ma ọ bụ eriri nbanye n'ime ala, ma nweekwa ike ịtụgharị na nnukwu ụgbọ mmiri maka ịgba mmiri n'ubi dị nso. A na-eme mmiri site na ọwara ma ọ bụ site na ọwa mmiri.
Usoro ogbugba mmiri n'ubi
A na-emebe usoro ihe eji eme ihe, nke na - eme ka ndagwurugwu ndị a na - eme, tụmadị na nnwale dabere na ezigbo ibu nke nwere ike imetụta igwe ahụ n'oge arụ ọrụ, ya mere a na - egosipụta ike dị ukwuu na - arụ ọrụ, na - eguzogide ihe ndị kachasị elu n'ihi irighiri ubi, irighiri ihe na nnukwu. ogologo oge. Ngwurugwu ndagwurugwu na-eru ogologo 5-6 m. Ngwunye ọkpọkọ na ihe ndị na-akwado ya na-enye ọbụna nkesa nke ibu na ibu, nke kachasị mkpa na ala ezighi ezi, n'ihi ọnọdụ dị n'akụkụ nkuku ahụ.
Nkwado ndagwurugwu ndagwurugwu a na-enye ike na nkwụsi ike site na sistemụ di na nwunye Maka ala zuru oke, enwere nkwonkwo swivel ndị ọzọ na-agbanwe agbanwe. Contactkpo nkpo mmanye nke na onye na-anakọta ihe na-enye ike ụgbọ ala di ichiche. Iji rụọ ọrụ na mmiri na-eme ihe ike, a na-enye plọg na nozzles nwere ọkpọkọ n'ime polyethylene.
Na 1966, etinyere oku mkpuchi dị n’elu igwe ndagwurugwu. N’oge na-adịghị anya, ọ ghọrọ ụkpụrụ ụlọ ọrụ.
Sistemụ Igwe Mmiri
Ndagwurugwu Ndagwurugwu Ndagwurugwu (onu ogugu 7) bu ihe eji eme ya na usoro ihe ndagwurugwu Ndagwurugwu. Omume egosila na ndị a bụ ngalaba ogbugba mmiri mmiri kachasị arụ ọrụ na ahịa taa. N'iji ihe eji adọ adọ, enwere ike ịgbanwe usoro mmiri site na ịkesa ebe ndị a gbara mmiri ma si otú ahụ belata ọnụahịa ịgbara otu hekta. Ndagwurugwu nwere ndagwurugwu na-eme ka ogbugba mmiri n'ubi di nfe ma nwekwaa mgbanwe n'ubi ma ego zuru oke
Akara nke ndagwurugwu pivots na-agụnye nhọrọ anọ nghọta - 4-wheel nwere ntaneti kwụ ọtọ, 4-wheel nwere swivel wiil, 2-wheel ma ọ bụ skid. Ndabere ndagwurugwu usoro a pụrụ ịtụkwasị obi, nke egosipụtara na ubi na-eme ka ọ dị mfe ma na-akwụ ụgwọ iji na-agba ubi site na hekta 2 ruo 121. Ngwurugwu Ndagwurugwu Ndaghari nke Ndagwurugwu nwere ike ibughari site na uzo rue uzo n'ime ihe na-erughị otu awa!
Ihe a na-enye ike bụ ihe na-eweta mmanụ di na outboard ma ọ bụ nye ọkụ eletrik.
Sistemụ Ubi mmiri
Inmata nke ndị ọrụ Valmont mere ka o kwe omume na 1974 ịmepụta ifesa mbụ okirikiri ụwa na ubu olu (Fig 8). Site n'enyemaka nke ubu aka na-achịkwa, ọ ga-ekwe omume ịgba ala mmiri nke ụdị ọ bụla na ezigbo eziokwu. Igwe eji agba mmiri nke Angle nwere ogologo ruru 62 m (87 m na console).
Ekwenye ntụkwasị obi nke njikọ nke ubu ahụ nwere mgbatị ụkwụ na-agbasawanye, nke na-enye igwe ahụ ezigbo nkwụsi ike mgbe ọ na-arụ ọrụ na mpaghara ezighi ezi. Maka ịgba ogbugba mmiri n'ubi, agbanyeghi na agbanye na agbanye aghọrọ onye ọ bụla sprayer na-achịkwa.
Followinggbaso mgbaama a, ntuzi aka ntụzi ma tụzigharị ihu na-ahụkwa ụzọ izizi nke ịgba mmiri na akụkụ abụọ ahụ.
Utu aka na-agbanwe agbanwe site na iji mmemme Compu-Spray. Ọdịiche na-agbanwe agbanwe na ọnụego mmiri mmiri, dabere na nrụgide dịnụ, mee ka otu ogbugba mmiri n'ubi ghara ịdị n'otu.
Nri a na-eme mgbe niile na-ekesa ọgwụ na fatịlaịza etinyere ya.
Ogwe njikwa dị mfe na igwe mgba ọkụ na-eme ka onye ọrụ ahụ nweere onwe ya, na-enweghị akpọ ọrụ aka ọrụ, weghachi igwe mgbe ihe mberede gasịrị.
Ndagwurugwu pere mpe dị mma maka obere ugbo ebe ubi chọrọ oke nhazi ọrụ dị elu, mana akụrụngwa na oke ubi ka pere mpe maka nnukwu nrụnye. Ngwọta kachasị mma maka ọnọdụ a bụ Machines Field Machines. Ha anaghị achọ mmezi buru ibu ma dị mfe iji.
Na mgbakwunye na igwe eletriki, Ndagwurugwu na-enye nrụnye dị mfe iji rụọ ọrụ na injin hydraulic ma ọ bụ mmanụ ọkụ.
Nnukwu nhọrọ maka ndị na-akụ ahịhịa na-arụ ọrụ na obere ubi. Spinner (Fig. 9) nwere ike ịgba mmiri mmiri site na nari hectare isii ma ọ bụ atọ, a ga - ejikwa ya na mpaghara ebe ọkụ eletrik enweghị oke.
A na-eji mmiri nrụgide na-eme ka a na-agbagharị otu ebe a.
Single span sprinkler na engine (Fig 10)
Dị ka Spinner, igwe a bụ nhọrọ ọzọ maka mpaghara nwere oke ịnweta ọkụ eletrik. Kwadoro site na mmanụ ọkụ mmanụ ụgbọala, ọ nwere ike ịnọ ọdụ ma ọ bụ dọrọ ya, chọrọ nrụgide mmiri dị ala ma dịkwa mma maka ubi nke otu hekta atọ.
Ndagwurugwu na Russia - netwọk siri ike nke ndị ahịa na nkwado ndị ahịa nwere ntụkwasị obi
A na-ekesa usoro ịgba mmiri na ndagwurugwu na Russia site na netwọkụ ndị na-ere ahịa sara mbara. Arụ ọrụ na onye ahịa ahụ bụ nke onwe ya ma tinye ọkachamara (onye nnọchite anya ire ere) na-eleta ugbo ahụ nke na-atụle oke ala na-eburu n'uche ịwụnye igwe na-agba mmiri na ndagwurugwu, họrọ oke mmiri dị kwa ụbọchị, na-ekpebi ebe maka ọdụ ụgbọ mmiri na-eburu n'uche ebe a na-enweta mmiri.
Mgbe ọrụ ahụ gachara, a na-ahazi ozi enwetara ma na-eji usoro a, arụ ọrụ igwe, dobe mmanụ na ebe a na-adọta mmiri. Emebewo atụmatụ a n’icheba nrịgo n’elu ala na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
A na-ahọrọ ebe a na-adọta pọmpụ maka igwe ndị na-echekwa mmiri dabere na mmiri na nrụgide chọrọ A na-ebelata nrụgide dị na pipeline site na ịhọrọ dayameta nke ọkpọkọ. Usoro ahụ gụnyere valvụ maka ịdọta mmiri maka oge oyi, lelee valves iji gbochie hama mmiri na sistemụ na sistemụ ikuku.
A na-arụ ụdị ọrụ ahụ maka ụdị ịgba mmiri ndagwurugwu na mmiri ọ bụla. Ka usoro ịgba mmiri jiri rụọ ọrụ nke ọma, a na-atụ aro nhọrọ kachasị ọnụ na nke dị ọnụ.
Asọmpi nke ụdị poteto na akwụkwọ nri n'ụlọ
Nduku - 2012: nsonaazụ nke ihe ngosi ahụ
Omsk breeders mepụta laabu maka micropropagation nduku
Magazin usoro nduku na-agba gị ka ị webinars
XIII Interregional Exhibition POTATO 2021 ga-emeghe na Chuvashia
Russia na WTO - mgbanwe maka azụmaahịa